Soo-saareyaasha Shandadaha Shiinaha Shandado, Sheeg Gawaarida Gawaarida Gawaarida - Angel Garment Accessories Co., Ltd.
Hoyga >Shabakadda > Shabakadaha rarka
Suunka dhinaca Nylon waxaa badanaa loo isticmaalaa duubista cirifka gudaha. Suunka dhinac ayaa si ballaaran loogu isticmaalaa duubista geeska iyo qurxinta alaabada maqaarka wanaagsan, shandadaha iyo boorsooyinka heerka sare ah, bacaha jiifka, teendhooyinka iyo dharka. Waxaa sidoo kale si ballaaran l......
Suunka suufka ah waxaa loola jeedaa dharka lagu tolay dun cudbi ah ama cudbi iyo suuf kiimiko ah oo la isku daray dun suuf ah. suunka suufka, suunka suufka dunta lagu miiray; Waxa kale oo loo qaybin karaa suunka caadiga ah ee suufka,
Qaab dhismeedka qaabku waa mid aad u adag oo muuqaalka naqshad ama xargo qoraal ah oo loogu talagalay xargaha jacquard.
Shabakadda PP waxay ka samaysan tahay noocyo kala duwan oo dun ah oo ah alaab ceeriin ah oo ka samaysan maro cidhiidhi ah.Waxaa jira noocyo badan oo ka mid ah dharka xargaha ee loo yaqaan 'PP', oo si ballaadhan loogu adeegsado dharka, kabaha, bacaha, warshadaha, beeraha, sahayda milatariga, gaadiidk......